4 dzimwe nzira dzakatsiga dzekutora zvekudya zvako | Bezzia
Maria vazquez | 01/06/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 30/05/2021 23:27 | Musha
Iwe unowanzo tora imwe mhando yekudya kuti ushande? Enda nechikafu chako neicho chevana vako kupaki? Bvisa aruminiyamu pepa uye kuputira kwepurasitiki uye bheja pazvinhu zvinogadziriswazve uye zvinogoneka senge izvo zvatinokumbira nhasi. Iwe unenge uchiita pasi rinofadza!
Kana iwe ukachengeta imwe neimwe yehomwe yaunoshandisa kutora masikati kana chidya newe, iwe ungangodaro uchashamisika! Asi ivo vanopedzisira vari mumarara zvisina kufanana nedzimwe nzira dzedu ina. Dzimwe nzira dzekuravira kwese asi iine hunhu hwakawanda zvakafanana se inoshandiswazve, inoenderera uye isina zvinhu zvine chepfu.
1 Snack'n'Go BIO chinobata chinobata
2 Stasher Platinum Silicone Mabhegi
3 Sattvaa simbi isina chinhu yemasikati bhokisi
4 Wakisi inoputira
Snack'n'Go BIO chinobata chinobata
Iyo Snack'n'Go BIO snack holders inzira inogadzikana uye isina mapurasitiki yekutora tudiki tudiki kana tudyo kuti utore kubasa. Yakagadzirwa neye organic donje ivo vane isina mvura rukoko rwebiobased firimu uye yemukati ino compost inovabvumira kuve nyore kuchenesa uye kukwana kwekutakura chikafu pasina kukushatisa.
Mushure mekuzvishandisa, iwe unofanirwa chete kuchenesa iyo yemukati dhinda nejira nyoro uye rega riome kuti uvashandise zvakare. Unogona kuzviisa mumuchina wekuwachisa kana zvichidikanwa. Yakagadzirwa uye yakaitwa muSpain zvinodzokororwa kusingaperi.
Stasher Platinum Silicone Mabhegi
Stasher platinum silicone mabhegi anonyanya kuita uye anoshanda, sezvaari yakakwana kuchengetedza chikafu ese akasimba uye emvura uye kudziisa izvi muchoto kana microwave. Uye zvakare, ivo vanonyanya kushanda kuchengetedza yako yekugezesa kana chero tudyo kana iwe uchienda parwendo.
Hypoallergenic uye isina yezvinhu zvine chepfu, iyo yakapfava uye isina-kubhururuka pamusoro inodzivirira kukura kwebhakitiriya. Hupenyu hwahwo hunobatsira hunogona kuwedzerwa kwemakore mazhinji kana hukachengetedzwa zvakanaka. Uye kana dzapera, aya mabhegi eplatinum silicone anogona kuendeswa kunzvimbo iri pedyo yakachena.
Senge dai izvi zvaive zvisina kukwana, aya maplatinum silicone mabhegi iva nekuvharwa kwechirimo Uye zviri nyore kuchenesa - iwe unogona kutozviisa mudhishi rekuwachira! Zvimwe zvakare zvine tsoka-yakavakirwa dhizaini inovabvumidza kuti vamire vakamira.
Sattvaa simbi isina chinhu yemasikati bhokisi
Stainless simbi masikati mabhokisi agara aripo uye handizive kuti nei "takakanganwa" nezvavo. Kuchengeta chikafu mumidziyo yepurasitiki kwemaawa mashoma kunochinja kuravira kwechikafu, zvisinei simbi isina simbi inochengeta chikafu chisina hwema.
Bhokisi remasikati reSattvaa rakagadzikana nharaunda sezvo rinogona kushandiswa kwemakore mazhinji nekuchengetedzwa kwakakodzera. Uye zvakare, dhizaini yayo inosanganisira magaba maviri madiki emukati izvo zvinokutendera iwe kuchengeta masukisi uye mamwe masangweji. Unogona kuvatora kupikiniki, kuenda kunoshanda kana kuenda kukwere zvakanaka nekuda kwekureruka kwayo.
Wakisi inoputira ndeimwe imwe nzira isingagadzirisike kuputira mapurasitiki. Ita shuwa kuti akagadzirwa ne organic organic ne Chitupa cheGOTS, cheEuropean mavambo. Ipapo chete ndipo pauchange uine vimbiso yekuti maitiro ekugadzira anoremekedza nharaunda, kuti jira harina zvinhu zvinogona kuva zvine chepfu, kuti kodzero dzemagariro evashandi dzinoremekedzwa uye kuti zvakare kuri padyo.
Kuvashandisa zviri nyore kwazvo: Unongofanira kuputira chikafu chaunoda kuvhara nacho, kuumba nemaoko ako kuitira kuti kupisa kubatsire icho chinomonera kuchinjira kwachiri nekuda kwechiito chewakisi, iyo zvakare ine yakasikwa inorwisa mabhakitiriya chiito. Ivo vanobva vagezwa nyore nyore nemvura inotonhora uye isiri-doro sipo. Uye kupfuura zvese, vanogona kushandiswazve kwemwedzi.
Nhasi hapana zvikonzero zvekuramba uchishungurudza aluminium foil kana firimu repurasitiki. Mumusika uchawana zvinochengetedza uye zvinowanika dzimwe nzira kunge mana atinogovana newe nhasi. Dzimwe nzira dzaunogona kuwana mune zero marara kana hofori online zvitoro seAmazon pamitengo inonzwisisika uchifunga kuti zvinodzokezve uye unogona kuzvishandisa pamatafura kana makore, zvinoenderana nechigadzirwa. Kuda kuchinja maitiro ako? Wakatozviita here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » 4 dzimwe nzira dzakatsiga dzekutakura zvinwiwa zvako